पुलिसका डिआइजी, जागिर खाँदा खाँदै किन जोडे दुईटी बुढी ? – Namaste Host
पुलिसका डिआइजी, जागिर खाँदा खाँदै किन जोडे दुईटी बुढी ?
January 28, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on पुलिसका डिआइजी, जागिर खाँदा खाँदै किन जोडे दुईटी बुढी ?
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार बहुविवाह वर्जित छ नेपालमा। कसैले बहुविवाह गरेमा एक देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने र सो विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी प्रावधान छ।
कानुन पालना गराउने सुरक्षा सङ्गठनमा त यो प्रावधानमा निक्कै कडाइ गरिने दाबी गरिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरका अनुसार प्रहरीमा कानुन विपरीतका काम अस्वीकार्य नै हुन्छ।
तर त्यही सङ्गठनका एक डिआइजीको घरमा दुई श्रीमती छन्। आफू दुई श्रीमतीको श्रीमान् भएको उनले लुकाएका पनि छैनन्। उनले शासनका साथ प्रहरी बर्दीसहित दायाँबायाँ जेठी र कान्छी श्रीमती उभ्याएर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै राखेका छन्।
ती डिआइजी हुन् गणेश ऐर जो प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश हेर्ने कार्यालयको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीको ब्याचका उनी पुस २३ गते एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। डिआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह पाएको खुसीमा घरमा खुसी छाउने नै भयो।
आमाको हातबाट टिका लगाए उनले। वरिपरि सन्तान राखेर तस्बिर खिचाए। अनि दायाँ जेठी श्रीमती कमला राना ऐर र बायाँ कान्छी सोनू ऐर उभ्याएर बिचमा भर्खर पाएको दर्ज्यानी चिन्हसहितको बर्दी लगाएर तस्बिर खिचे। उनका आफन्तले बधाई दिँदै त्यही तस्बिर फेसबुकमा अपलोड गरिदिए। जुन तस्बिर यो समाचार लेखेको समसम्म यथावतै रहेको उकेराले जनाएको छ।
जानकार स्रोतका अनुसार उनको पहिलो श्रीमती उनी रोल्पामा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा खटिँदा विवाह गरेका हुन्। दोस्रो श्रीमती सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पोस्टिङ हुँदा विवाह गरेका हुन्।
‘रोल्पामा जाँदा पहिली विवाह नै गरे,’ उनको परिवारबारे जानकार स्रोतले भन्यो‘ कान्छी श्रीमती चैँ सिन्धुपाल्चोकमा खटिँदा ल्याएका हुन्।’ उनले जेठी–कान्छी दुबैलाई मिलाएर एकै घरमा राखेका छन्।
दुवै श्रीमती मिलेर बसे पनि कानुनले बहुविवाह वर्जित गरेको छ। यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने मात्रै हैन, बहु विवाह गर्ने श्रीमान् र अर्को श्रीमती भएको थाहा पाउँदापाउँदै विवाह गर्नेलाई समेत अहिलेको मुलुकी संहिताले कारबाहीको भागिदार बनाएको छ।
‘म ढाँट्दिन, दुइटा श्रीमती छैनन्’
जेठी श्रीमती कमला राना ऐर र कान्छी सोनू ऐरका साथ गणेश। तस्बिर कमला र सोनूको फेसबुक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विना कुनै हिचकिचाहट डिआइजी तहका अधिकृतले जेठी र कान्छीको बिचमा उभिएको तस्बिर राखेकाले उनलाई यो सम्बन्ध लुकाउन के आवश्यक छ र रु
‘तपाईँको दुई जना श्रीमती हो ?’ डिआइजी ऐरलाई जिज्ञासा राख्दा उनले अस्वीकार गर्दै भने‘ हैन नि, एउटै हो।’ ‘अनि फेसबुकमा दायाँबायाँ उभ्याएर खिचेको तस्बिर कसको त ?’ उनले भने‘ सँगै फोटो खिच्दैमा श्रीमती नै हुन्छन् र आफन्त पनि हुन सक्छन् नि।’
बहुविवाह सम्बन्धी कानुनले यसलाई निषेध गरेको छ। तर कसैले दुई श्रीमती भएको पुष्टि भए पनि कारबाही हुनसक्ने आधार भने देखिएन। डिआइजी ऐरले दुवै श्रीमती सार्वजनिक गरेकै आधारमा उनीमाथि कानुनी कारबाही हुने देखिएन। यसका लागि उनका दुई श्रीमतीमध्ये कसैले उजुरी नै गर्नुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता र अर्का अधिवक्ताले बताए।
उजुरी आए मात्र कारबाही
प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुवरले प्रहरी सङ्गठनभित्र कसैले बहुविवाह गरेमा उजुरी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने‘पीडितले उजुरी गर्छ भने कारबाही हुन्छ।’
जुनसुकै अपराधमा पनि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उजुरी महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै बहुविवाहको सन्दर्भमा पुष्टि हुन गाह्रो हुने र कोही सँगै बस्दैमा यसलाई बहुविवाह हो भनेर कारबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
‘प्रहरी सङ्गठन भित्र कसैले बहुविवाहको उजुरी गर्छ भने र प्रमाणित हुन्छ भने सङ्गठन भित्रकालाई पनि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने‘ हामी कारबाही गर्छौँ।’ स्रोत : खबर सेन्टर
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, माघ १६ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
हिजो ‘भ्वाईस् अफ नेपाल’बाट बाहिरिएकी एलिनाको सबैलाई रुवाउने कथा । लेभर काम गरेर दिनको ७०० कमाउँछिन् (भिडियो हेर्नुस)
मान्छेको जस्तै दात, जिब्रो भएको माछा माझीले समाते संसारभर भयो भाइरल (फोटो र भिडियो सहित)